Ukuphupha ngeMasked Ball Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kubantu abathanda i-carnival okanye i-carnival, akukho nto ilunge ngakumbi kunokubona ukuxokozela kwabo bonke abantu abaziziyatha kwaye batyibilike kwisazisi esahlukileyo ngendleko kunye / okanye imaski. Kwibhola efihliweyo, abantu bayabhiyoza, badanise, basele, kwaye bahleke, zihlala zikhokelela kwi-hangover embi ngomonakalo omkhulu ngosuku olulandelayo.
Kodwa abalandeli bemisitho enjalo abayi kuthintela nkqu nemiphumo engathandekiyo yalo msitho ekuguquleni ubusuku bube yimini kwakhona kwibhola elandelayo efihliweyo kwaye babhiyozele ngokungathi akukho ngomso.
Kodwa kutheni sidibana kwibhola efihliweyo kwilizwe lethu lamaphupha? Yintoni ebangela olu phawu? Ngaba kunokwenzeka ukuba iphupha linento yokuyifihla kwilizwe langaphandle?
1 Uphawu lwephupha «ibhola efihliweyo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ibhola efihliweyo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ibhola efihliweyo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ibhola efihliweyo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, okufihliweyo emva kwephupha lebhola efihliweyo kukoyikwa komntu ophuphayo ngaphambi kokutyhilwa kobuntu bakhe bokwenyani. Ukuba uthatha inxaxheba kwibhola efihliweyo kwaye unxibe imaski, kuya kufuneka uze Amaqhinga y Ilahleko ukubala ebomini bokwenyani. Le meko injengephupha ikwalumkisa umntu ochaphazelekayo ngobuqhetseba. Kuya kufuneka unike ingqalelo ekhethekileyo kwindawo ekufutshane nawe, kuba kukho abantu apha abancuma ngobuso bakho, kodwa bazama ukukukhohlisa ukuba uzenzele inzuzo.
Ibhola efihliweyo njengophawu lwephupha nayo inokuba mfutshane, kodwa ngokuqinisekileyo ulonwabo olonwabisayo Iingoma. Ukuphupha kuyayazi le nto kwasekuqaleni. Nangona kunjalo, ufuna ukonwabela umzuzu ngokupheleleyo kwaye ke ubeke ulonwabo kuqala. Kuye, ixesha libalulekile. Akafuni ukucinga malunga "nasemva," kodwa endaweni yoko kuziva ngathi ubomi buyaphazamiseka apha kwaye ngoku.
Abantu abaninzi abafake izigqubuthelo abasephupheni kwibhola efihliweyo banokuqondwa njengesicelo ukuze iphupha lingahanjiswa ngamayelenqe kunye nobuxoki babanye. Kuya kufuneka uwubone njengomsebenzi wakho ukunganiki indawo yokuzalela yomona, inzondo kunye nobuxoki, kwaye uqinisekise abanye abantu ngokubaluleka kobomi obunyanisekileyo kunye nomanyano oluthembekileyo.
Uphawu lwephupha «ibhola efihliweyo» - ukutolikwa kwengqondo
Umdaniso ogqunyiweyo usebenza kutoliko lwengqondo lwamaphupha njengesipili apho iphupha kufuneka libonwe kanye. Iimaski ezinxitywa kwimidlalo yebhola efihliweyo ephupha ngeendlela ezahlukeneyo kwaye zihlala zingazi nto izama ukuba njalo. ndiyinyani ukufihla kwihlabathi langaphandle.
Ukuba ibhola efihliweyo yenzeka ngaphandle kwesizathu esithile, kuxhomekeke kwinqanaba lembono yengqondo, umntu uhlala evezwa yimeko yakhe yovuko ebomini. Oku akunakuba ngumceli mngeni ekuphupheni kwakho kuphela, kodwa kunokuthetha ukuba yinto ecaphukisayo kwindawo yakho.
Imaski, enxitywe ngumntu ophuphayo kwibhola efihliweyo, nayo inokusetyenziselwa iminqweno yesini y Ukukhetha ngokwesondo kuba. Umntu angathanda ukufumana oku kungaziwa ngokupheleleyo kwaye kuyimfihlo. Ukuphupha akunakuze kuvume elubala le minqweno ikhethekileyo kubomi bemihla ngemihla.
Uphawu lwephupha «ibhola efihliweyo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha "ibhola efihliweyo" ilumkisa abo baphuphayo. Amaqhingaapho asongela ngokuwela endleleni yakhe yokukhula ngokomoya.